ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ချဉ်းကပ်လာနေသော Super Typhoon Choi-Wan | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ချဉ်းကပ်လာနေသော Super Typhoon Choi-Wan
September 17, 2009 — mmweather
Super Typhoon Choi-Wan ဟာ အခုဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံကို ခြိမ်းခြောက်စပြုလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း ဂျပန်မိုးလေဝသဌာနက တိုင်းထွာခန့်မှန်းချက်အရ ၁၉ ရက်နဲ့ ၂ဝရက်နေ့တွေမှာ ဂျပန်နိုင်ငံကို တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားကို တည့်တည့်ကြီး မဟုတ်ရင်တောင်မှ အဖျားခတ်တိုက်ခံရမဲ့ အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အကြောင်း အခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်မိုးလေဝသဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက်
Posted in Education, Weather Alert, Weather News. Tags: CHOI-WAN, typhoon, weather. LeaveaComment »
« စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN update#3
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN update#4 »